कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिलाई किन आवश्यक छ फलोअप परीक्षण? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिलाई किन आवश्यक छ फलोअप परीक्षण? स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए फलोअपको मिति कुर्नु हुँदैन, तत्काल अस्पताल जानुपर्छ
कमला गुरुङ सोमबार, फागुन १०, २०७७, १७:४१:००
काठमाडौं- अस्पतालमा भर्ना भई निको भएर फर्कने कोरोना संक्रमितलाई डा अनुप बास्तोला आग्रह गर्छन्, ‘तपाईंहरु घर गएपछि पनि निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा रहनूस् है।’
विशेषगरी उनको यो आग्रह अस्पतालको आइसियु, भेन्टिलेटरमा भर्ना भएका, अक्सिजन आवश्यक परेका र निमोनिया भएका संक्रमितका लागि हो। कोरोना निको भइसकेपछि पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भन्दै डा बास्तोला चिकित्सकको सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिरहन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमितले जुन अस्पतालमा देखाएका छन्, त्यहाँका चिकित्सकले उनीहरुको फलोअपको योजना बनाउँछ। आवश्यक परे सिटी स्क्यान दोहो¥याएर गरिन्छ। छाती दुखेकालाई केही भएको छ कि भनेर हामी इसिजी गरेर हेर्छौ। त्यसैले फलोअपमा जानुपर्छ। चिकित्सकको परामर्शमा बस्नुपर्छ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा बास्तोलाका अनुसार कोरोना निको भए पनि उनीहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ।
नेपालमा पनि कोरोना निको भइसकेका धेरैजसो व्यक्तिमा सामान्यदेखि जटिल खालका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन्। खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या, थकाइ लाग्नेदेखि मुटु फेल हुने र फोक्सो सुक्ने जस्ता समस्या देखिएको उनले बताए।
निको भइसके पनि शरीरमा देखिएको सानोभन्दा सानो परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनी बताउँछन्। अनावश्यक रुपमा छाती दुखे या भारी भए, खुट्टा सुन्निए, टाउको दुखे, श्वासप्रश्वासमा समस्या भए तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिन जरुरी रहेको उनले बताए।
‘शरीरमा नयाँ लक्षण वा परिवर्तन देखिएको छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भएन। किनभने, यो भाइरस नयाँ हो। यसको अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैले चिकित्सकले दिएको फलोअप डेट भुल्नु हुँदैन,’ उनले भने।
निको भइसकेपछि स्वास्थ्यमा देखिएको सुधारलाई तुलना गर्न डा बास्तोला सुझाउँछन्। पहिला कति हिँड्न सक्थें, अहिले कति हिँड्न सक्छु, श्वासप्रश्वास बढ्यो कि? अक्सिजनको आवश्यकता झन् बढ्यो कि? खोकी लाग्न थाल्यो कि? दम बढ्यो कि? लगायत कुराहरुमा संक्रमित व्यक्ति बढी चनाखो हुनपर्छ।
चिकित्सकले भने अनुसार स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुनुको सट्टा उल्टो बढ्न थाले तत्काल अस्पताल जान उनको सुझाव छ।
‘अस्पताल बस्दा भएका सुधार र घरमा गइसकेपछि हुनुपर्ने सुधार भयो–भएन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। किनभने, चिकित्सकले अस्पतालमा हुँदा उनीहरुलाई तपाईंको अवस्थामा यो यो सुधार आउँछ भनेर बताएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर सुधार हुनुको साटो समस्या बढ्दै गयो भने चिकित्सकले बोलाएको समय कुर्नु हुँदैन। तत्काल अस्पताल जानुपर्छ।’
अस्पताल भर्ना भए पनि जटिल खालका समस्या नभएका र स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएका व्यक्तिहरु भने फलोअपमा जान आवश्यक नरहेको उनी बताउँछन्। निमोनियो भइसकेका व्यक्तिलाई विशेषगरी चिसो, धुलो, धुवाँबाट बच्न उनको सुझाव छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा सन्तकुमार दास गम्भीर खालका समस्या देखिएका कोरोना संक्रमित निको भइसकेपछि पनि चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्।
डा दासका अनुसार यी अवस्था भएका संक्रमितहरु मात्र चिकित्सकको फलोअपमा जानुपर्छ– एक, अक्सिजन चाहिने। दोस्रो, श्वासप्रश्वासमा समस्या भए। तेस्रो, खुट्टा सुन्निएको। चौथौँ, राति सुत्न गाह्रो हुनेहरु।
फोक्सोमा अझै जटिल खालको समस्या भए वा कोरोनाले मुटुमा पोस्ट कोभिडका असर देखिए खुट्टा सुन्निएर आउने उनले बताए।
डा दासले भने, ‘घरमै अक्सिजन लिएर बस्नु भनेर डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरु र निको भइसकेपछि पनि दिनचर्यामा असर गरेको छ भने उनीहरु चिकित्सकको फलोअपमा जानुपर्छ।’
अस्पतालको शय्याबाट कोरोना संक्रमितको प्रश्न: पोजिटिभ हुनेले अरु रोगको उपचार नै नपाउने? म मात्रै होइन। त्यहाँ आउने धेरैजसो बिरामीलाई यस्तो व्यवहार गरेको पाएँ। भित्र अक्सिजन र बेड खाली हुँदा हुँदै पनि उनीहरुले खाली छैन भन्दै बिरामी कुराउने गर्थे। १६ घण्टा पहिले
कोरोना कहर : कुन अवस्थामा गर्भवती अस्पताल जाने? अस्पताल जानुभन्दा अस्पतालले उपलब्ध गराउने फोन नम्बरबाट परामर्श गर्न सकिने उनले बताए। तर शरीरमा कुनै असहजता हुने बित्तिकै अस्पताल जानुपर्ने उनी बताउँछन्। २० घण्टा पहिले
काठमाडौंसहित अन्य जिल्लाबाट चितवन लगिँदै कोरोना संक्रमित, कति छन् शय्या? के छ अक्सिजनको अवस्था? शय्याका लागि बिरामीहरु भौतारिदै हिडिरहेको दृश्य अहिले अधिकांश अस्पतालमा देख्न सकिन्छ। शय्याको खोजीमा बिरामीहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा घुमिरहेका छन्। सोमबार, वैशाख २७, २०७८
नेपालमा अक्सिजन अभावः अधिकांश निजी अस्पतालहरुले गरे संक्रमितलाई भर्ना नै नलिने घोषणा! ७ घण्टा पहिले
निषेधाज्ञामा मानसिक स्वास्थ्यको स्याहार गर्ने ९ उपाय ७ घण्टा पहिले
अक्सिजन उद्योगहरुमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ, विद्युत् नियमित गर्न सीसीएमसीको निर्देशन ७ घण्टा पहिले
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भइसक्यो: डा चन्द्रमणि अधिकारी [भिडियो] ९ घण्टा पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप: के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन? ९ घण्टा पहिले
काठमाडौंमा जेठ २ गतेबाट चिनियाँ खोप भेरोसेल दिइने २२ घण्टा पहिले